ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ နေ့စဉ်အစားအသောက်တွေမှာ မပါမဖြစ် စားသုံးနေတဲ့ အချိုမှုန့် ကို ဘာနဲ့ လုပ်ထားသလဲ?…. – Shwe Naung
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ရေရှည် မှန်မှန် စားသွားရင် ဒီလောက် အန္တရာယ် များပါ တယ် ဆိုတဲ့ အချိုမှုန့် ဆိုတာ Monosodium glutamate (MSG) လို့ခေါ်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Glutamic Acid လို့ခေါ်တဲ့ Amino Acid တစ်မျိုး ပါဝင်ပြီး စားစ ရာထဲ ထည့်လိုက်ရင် Free Glumate တွေ အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲသွားကာ အစားအေ သာက်တွေရဲ့ အရ သာကို ဓာတုနည်းနဲ့ လျှာပေါ်မှာ ဆပွား တိုးပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အချိုမှုန့်ဟာ ဟင်းခတ်ပစ္စည်း တစ်ခု ဟုတ်ပါသလား.?
ပုံမှန်သုံးသင့် တဲ့ ဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင်တစ်ခု လုံးဝမ ဟုတ်ပါ။ နည်းနည်းစားစား များများစားစား ရေရှည် စားရင် အန္တရာယ်ကတော့ ရှိတာပါပဲလို့ ပညာရှင်များက ပြောကြားပါတယ်။
Good Manufacturing Practice (GMP) လို့ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့် ထုတ်လုပ်မှု စနစ်ကောင်း (GMP စနစ်) ရဲ့ အစားအသောက်တွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ အချိုမှုန့် လုံး၀ မပါပါဘူး။
အချိုမှုန့်ကို ရေရှည်ပုံမှန် စားသုံးသွားရင် ဘာဆိုးကျိုးတွေ ရှိလာနိုင်မလဲ
(၂) အစာ အလွန်အကျွံ စားချင်စိတ်ကို တိုးပွားဖြစ်ပေါ်စေသလို အဝလွန်ခြင်းကို တားဆီးပေးတဲ့ ဟော်မုန်းများကိုပါ ပိတ်ဆို့လို့ အဝလွန်ခြင်းကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အဝလွန်ခြင်း ရောက်လာရင် သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ နှလုံးသွေးကြောပိတ်စတဲ့အဖော်အပေါင်းတွေပါပါလာပါလိမ့်မယ်။
(၃) ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကို မြန်မြန် ပျက်စီးယိုယွင်း စေပါတယ်။ မှတ်ဉာဏ်ကို အရွယ်မတိုင်ခင် ပျောက်ဆုံးစေပြီး မေ့တတ်တဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်စေဖို့ အလားအလာ အရမ်း များစေပါတယ်။ အချိုမှုန့်ကို မွေးကင်းစကတည်းကနေ စပြီး စားတဲ့ ကလေးတွေမှာ ဉာဏ်ရည်ပိုင်း ယုတ်လျော့မှု ရှိတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
(၄) ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ အချိုမှုန့် သုံးစွဲမှုကို လုံးဝဖြတ်တောက်ရှောင်ကြဉ်ဖို့ အမျိုးသားအဆင့် ကြေငြာချက်တွေ ဥပဒေတွေ အလန့်တကြား ထုတ်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဂျာမန်ကျန်းမာရေး ပညာရှင်တွေ ဘာတွေ့ရလို့လဲ ဆိုတာ စာဖတ်သူတို့ သိပါသလား။
အချိုမှုန့် စားတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ မွေးလာတဲ့ ကလေးတွေဟာ အင်ဆူလင်ဟော်မုန်း စွမ်းရည်ကျဆင်း၍ မတိုးတော့ခြင်း (Insulin-resistant) မွေးရာပါ ဖြစ်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကလေးတွေဟာ ကြီးလာရင် ဆီးချိုဖြစ်ဖို့ သေချာသလောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေရဲ့ ဆီးချိုဖြစ်ပွားနှုန်း မြင့်မားနေတဲ့ အချက်တွေထဲက တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာတွေဟာ အစားအသောက် စားချင်စိတ်ကို အဓိက ထိန်းချုပ်တဲ့ ဦးနှောက်ဧရိယာတွေ ဖြစ်လို့ ဒီလို ကလေးတွေဟာ ကြီးလာရင် အစားအသောက် အလွန်အကျွံစားတဲ့ အကျင့်ရှိကာ အဝလွန်ပြီး ရောဂါတွေ ထူစေတတ်တာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း လေ့လာတွေ့ရှိ ထားပါတယ်။
(ဒါဟာ အချို့မှုန့်ကပေးတဲ့ အမျိုးသား ကျန်းမာရေး/ လူမှုရေး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး (National Health/Social Burden) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အချိုမှုန့် ဝယ်ယူတင်သွင်းရတဲ့အတွက် နိုင်ငံနဲ့လူမျိုး အကျိုးရှိစေမယ့် တခြားအရာတွေ ဝယ်ယူဖို့ နိုင်ငံခြားငွေ လျော့စေလို့ တိုင်းပြည်အတွက်လဲ နစ်နာပါတယ်)
(၆) မျိုးပွားစွမ်းရည် ကျဆင်းခြင်း၊ သားသမီးရနိုင်စွမ်း ကျဆင်းခြင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Chinese Restaurant Syndrome ခေါ် တရုတ်စားတော်ဆက်ရောဂါစု ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီရောဂါစုဟာ အချိုမှုန့် လွန်ကဲစွာ ပါတဲ့ အစားအသောက် စားပြီးပြီးချင်းမှာ မျက်နှာ၊ လည်ပင်း နဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ အနီစက်တွေ ထွက်လာခြင်း၊ ခေါင်းအရမ်းထိုးကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ မျက်နှာမှာ တင်းကြပ်နေတယ်လို့ ခံစားရတတ်ခြင်း၊ မေးလှုပ် ပါးစပ်ဖွင့်ရတာ လေးခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ခါးနာခြင်း စတာတွေ ခံစားရတတ်တဲ့ အချိုမှုန့်နဲ့ ဓာတ်မတည့်တဲ့ ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။
(၇) ပန်ကရိယခေါ် မုန့်ချိုအိတ်ရောင်ရောဂါ အပါအဝင် ကိုယ်တွင်းကလီစာ တစ်ခုခု ရောင်ယမ်းတဲ့ ရောဂါ ရှိနေသူတွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ စာသင်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ အထူးရှောင်ကြဉ် သင့်ပါတယ်။
(၈) လူအများစုက ဆားကအငန် အချိုမှုန့်က အပေါ့ ဆိုပြီး တလွဲမှတ်ယူထားကြပါတယ်။ ဒီတော့ ဆားထည့်လွန်လို့ ငန်သွားရင် အချိုမှုန့်များများ ထပ်ထည့် ပါတယ်။ အမှန်က ဆားက Sodium chloride ၊ အချိုမှုန့်က Monosodium glutamate ဖြစ်လို့ နှစ်ခုလုံး ဆိုဒီယမ် (Sodium) ဆားဓာတ်ဖြစ်ကာ နှစ်ခု ပြိုင်စားသုံးရင် သွေးတွင်းဆိုဒီယမ် မြင့်တက်မှု အရမ်းများလာစေကာ သွေးတိုးရောဂါကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးတိုးရောဂါ ကာကွယ်လိုသူများနဲ့ ရှိသူများဟာ အချိုမှုန့်ကို အထူးရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
အချိုမှုန့် စွဲလမ်းနေခြင်းကို ဘယ်လို လျှော့ချ အမြစ်ဖြတ်ကြမလဲ
(၂) ယေဘုယျလမ်းညွှန် (General Guideline) အရ ပြောရရင် အစားအသောက် တစ်ကီလို (၂.၂ပေါင်) ကို အချိုမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းနဲ့ တစ်ဇွန်းထက် ပိုမသုံးပါနဲ့။ ဒါဆိုရင်တော့ အန္တရာယ် နည်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။
(၃) ရယ်ဒီမိတ် အစားအသောက်တွေ အားလုံးနီးပါးမှာ အချိုမှုန့် ပါပြီးသားဆိုတာ သတိထားပါ။ ဘယ်တော့မှ အချိုမှုန့် ထပ်မထည့်ပါနဲ့။
(၄) ရယ်ဒီမိတ် စားစရာတွေ ဝယ်ရင် လေဘယ်လ် ပေါ်မှာ ပါတဲ့ အချိုမှုန့်ပါဝင်မှု ပမာဏကို ရှာဖွေပါ။ အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ အစားအသောက်တံဆိပ်တွေ အားလုံးရဲ့ ပါဝင်ဖက်ပစ္စည်းစာရင်း (Ingredient List) ရဲ့ အောက်ဆုံးမှာ အချိုမှုန့် တကယ်သုံးထားရင် သုံးထားကြောင်း ပမာဏ အတိအကျ ပါပါတယ်။
(၅) ရိုးရာ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေ (ဥပမာ ပုစွန်ခြောက်၊ ငါးပိ စတာတွေ) ကို ပြန်လည်အစားထိုး သုံးသင့်ပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှေးအစဉ်အဆက် ဘိုးဘွားများဟာ ထွားကျိုင်းသန်မာ ရောဂါကင်းခဲ့တာ အချိုမှုန့် မစားခဲ့ကြတာလည်း ပါပါတယ်။
ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ေရရွည္ မွန္မွန္ စားသြားရင္ ဒီေလာက္ အႏၱရာယ္ မ်ားပါ တယ္ ဆိုတဲ့ အခ်ဳိမႈန္႔ ဆိုတာ Monosodium glutamate (MSG) လို႔ေခၚတဲ့ ျဒပ္ေပါင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ Glutamic Acid လို႔ေခၚတဲ့ Amino Acid တစ္မ်ိဳး ပါ၀င္ျပီး စားစ ရာထဲ ထည့္လိုက္ရင္ Free Glumate ေတြ အျဖစ္ကို ေျပာင္းလဲသြားကာ အစားအေ သာက္ေတြရဲ့ အရ သာကို ဓာတုနည္းနဲ႔ လွ်ာေပၚမွာ ဆပြား တိုးေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အခ်ဳိမႈန္႔ဟာ ဟင္းခတ္ပစၥည္း တစ္ခု ဟုတ္ပါသလား.?
ပံုမွန္သံုးသင့္ တဲ့ ဟင္းခတ္ အေမႊးအၾကိဳင္တစ္ခု လံုး၀မ ဟုတ္ပါ။ နည္းနည္းစားစား မ်ားမ်ားစားစား ေရရွည္ စားရင္ အႏၱရာယ္ကေတာ့ ရွိတာပါပဲလို႔ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားပါတယ္။
Good Manufacturing Practice (GMP) လို႔ေခၚတဲ့ ကမၻာ့အဆင့္ ထုတ္လုပ္မွဳ စနစ္ေကာင္း (GMP စနစ္) ရဲ့ အစားအေသာက္ေတြ ထုတ္လုပ္တဲ့ ေနရာမွာ အခ်ိဳမွဳန္႔ လံုး၀ မပါပါဘူး။
(၄) ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွာ အခ်ိဳမွဳန္႔ သံုးစြဲမွဳကို လံုး၀ျဖတ္ေတာက္ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေၾကျငာခ်က္ေတြ ဥပေဒေတြ အလန္႔တၾကား ထုတ္ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ဂ်ာမန္က်န္းမာေရး ပညာရွင္ေတြ ဘာေတြ႔ရလို႔လဲ ဆိုတာ စာဖတ္သူတို႔ သိပါသလား။
အခ်ိဳမွဳန္႔ စားတဲ့ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေတြ ေမြးလာတဲ့ ကေလးေတြဟာ အင္ဆူလင္ေဟာ္မုန္း စြမ္းရည္က်ဆင္း၍ မတိုးေတာ့ျခင္း (Insulin-resistant) ေမြးရာပါ ျဖစ္လာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကေလးေတြဟာ ၾကီးလာရင္ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ဖို႔ ေသခ်ာသေလာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ ဖြ႔ံျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြရဲ့ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ပြားႏွဳန္း ျမင့္မားေနတဲ့ အခ်က္ေတြထဲက တစ္ခု အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။
(၅) ေနာက္တစ္ခ်က္က ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ေတြ အခ်ိဳမွဳန္႔စားတဲ့ အက်င့္ေၾကာင့္ ေမြးလာတဲ့ ကေလးေတြရဲ့ medulla oblongata, thalamus, or hypothalamus ဆိုတဲ့ ဦးေႏွာက္ အစိတ္အပိုင္းေတြမွာ ရွိတဲ့ အာရံုေၾကာဆဲလ္ေတြကို ပ်က္စီးေစပါတယ္။
ဒီေနရာေတြဟာ အစားအေသာက္ စားခ်င္စိတ္ကို အဓိက ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ဦးေႏွာက္ဧရိယာေတြ ျဖစ္လို႔ ဒီလို ကေလးေတြဟာ ႀကီးလာရင္ အစားအေသာက္ အလြန္အကြ်ံစားတဲ့ အက်င့္ရွိကာ အ၀လြန္ျပီး ေရာဂါေတြ ထူေစတတ္တာ ကမၻာတစ္၀န္း ေလ့လာေတြ႔ရွိ ထားပါတယ္။
အိမ်တိုင်း အိမ်တိုင်းမှာ ဘုန်းကံနိမ့် လာဘ် တိတ်စေပြီး ဆိုးကျိုးများဖြစ် လာနိုင်သော အကျင့်ဆိုးများ
မနေ့က နိုင်ငံရေးကြောင့် ထိန်းသိမ်းခံရ သူတွေကိုလွှတ်ပေး ခဲ့ပေမယ့် ပိုင်တံခွန် ကတော့ မပါလာသေးကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ အစ်မဖြစ်သူ မေစစ်သွေး………